Akụkọ - “Nnwale ngwa ngwa COVID -19 (Colloidal Gold)” nke JBT nwetara nkwenye site na PEI Germany na ntozu nke onye na -ebubata ngwa ahịa nke ọma.
01. COVID-19 Antigen Schnelltest (Colloidal Gold) nke Joinstar Biomedical Technology mepụtara wee nweta nkwenye arụmọrụ site na ụlọ akwụkwọ Paul Ehrlich. Ya na Abbott, Roche, SD, BD, Siemens LumiraDX, na ụlọ ọrụ ndị ọzọ ama ama n'ụwa, Joinstar Biomedical Technology ghọrọ otu n'ime ndị nrụpụta antigen ole na ole nke PEI kwadoro na ọkwa mbụ n'ụwa niile.
“Paul-ehrlich-institut” (PEI) na-anọchite anya ụlọ akwụkwọ gọọmentị etiti nke ọgwụ mgbochi na Biomedicine, na-ahụ maka ụlọ ọrụ nyocha ọgwụ na ụlọ ọrụ na-ahụ maka iwu. PEI bụkwa onye isi gọọmentị etiti na -akọrọ ndị Ministry of Health, ebe na -arụkọ ọrụ ọnụ maka mmesi obi ike nke ngwaahịa ọbara WHO na akụrụngwa nchọpụta vitro. Akpọrọ ya aha onye ntụzi ntọala ya, onye na -ahụ maka ọgwụ mgbochi ọrịa na onye nwetara Nobel, Paul Ehrlich.
02. Banyere ule ngwa ngwa antigen
Kedu ihe kpatara anyị ji achọ nnwale antigen ngwa ngwa?
Antigen na -ezo aka na ihe nwere ike ịmịpụta ọgwụ mgbochi ọrịa, ọ bụ ihe ọ bụla nwere ike ibute mmeghachi ahụ mgbochi. Enwere ike iji nnwale antigen na mbido ọrịa (mgbe mmalite nke mgbaàmà n'ime ụbọchị 1-5 ma ọ bụ ọbụlagodi n'oge nnabata) iji nweta nsonaazụ dị mma. Usoro nchọpụta antigen dabara adaba maka nyocha obere oge nke ndị a na-enyo enyo na ọrịa coronavirus buru ibu ma dịkwa oke mma maka mpaghara nwere ntiwapụ. Dabere na ọnọdụ siri ike ma dị mgbagwoju anya, WHO, FIND na ọtụtụ ndị otu mba ụwa na -akwalite nchọpụta Antigen dị ka ụzọ dị irè.
Gụnyere UK, France, Slovakia, Slovenia, Georgia, na ọtụtụ mba ndị ọzọ amalitelarị zụrụ ma mee nnwale nnwale Antigen na nnukwu ebe mgbakọ mmadụ.
Nyocha COVID-19 Antigen Rapid (Colloidal Gold)
nasopharyngeal swab dị ka ihe nlele
Mmetụta dị elu & nkọwapụta
Oge windo dị mkpirikpi, chọpụta ọrịa n'oge mmalite na oge nnabata, ọ bara uru maka nyocha mbụ. Nchọpụta nke mbụ na -eweta ọgwụgwọ ka mma.
Ọ dabara na ọnọdụ dị iche iche: ụlọ ọrụ ahọpụtara (dịka ụlọ ọgwụ); ịmaliteghachi ọrụ na ụlọ akwụkwọ, nleba anya na -aga n'ihu maka ọnọdụ akwara ọbara, wdg;
Otu usoro, dị mfe iji rụọ ọrụ, na-ebelata nchọpụta furu efu na nchọpụta njehie kpatara njehie arụ ọrụ;
Nye azu nke reagents na ihe oriri achọrọ maka nnwale; enweghị akụrụngwa achọrọ;
Ọrụ ngwa ngwa, na-ebute nkeji 10-15;
Ọnọdụ nchekwa: 2 ~ 30 ℃, ọ dịghị mkpa maka njem yinye oyi;
Nkọwa nhọrọ: 25 servings/box, 1 serving/box;
Ọtụtụ ụdịdị imekọ ihe ọnụ, na -anabata OEM/ODM
04. Nweta ntozu:
Asambodo CE, mbupụ ndepụta nke Ministry of Commerce
Edepụtara na nchekwa data azịza coronavirus nke EU, nke WHO-FIND Innovation Foundation depụtara, wee gafere nyocha nke PEI nke German,
Akwụkwọ ndebanye aha nke Germany na Italy
Oge ezipụ: Mar-12-2021